News Plus Views: January 2011
राव भ्रमणमाथि अर्जुनदृष्टि
विवेकानन्द फाउन्डेसनले नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको नेपालसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी हुन पुगेका एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार शिवशंकर मेननले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीचको आपसी सहमतिबाट जुनसुकै दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई भारतले स्वीकार गर्ने बताएका थिए । डा. भट्टराईले मेननको भनाइको आशय 'माओवादी नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समेत भारतको समर्थन रहनेछ' भन्ने लगाउँदै यसैअनुरुप बाहिर प्रचारप्रसार गरे । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यसले थप नयाँ पन हासिल गर्यो । मेननको भनाइ र दिल्ली भ्रमणको क्रममा भारतको सत्ताधारी तथा विपक्षी दलबाट डा. भट्टराईले प्राप्त गरेको उच्च प्राथमिकताले माओवादीका तर्फबाट डा. भट्टराईले अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व गरे त्यसलाई स्वीकार गर्ने हदसम्म भारत लचिलो भएको भन्ने निष्कर्ष नेपालमा निकालियो । प्रधानमन्त्रीसँग सहज व्यक्तिगत पहुँच भएका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकारको भनाइलाई विदेशमन्त्रीको भनाइभन्दा बढी गम्भीरतापूर्वक लिने गरिन्छ । त्यसैले पनि मेननको भनाइपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको बहसले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ ।
ठीक यति बेला आफ्नो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मुताविक भारतीय विदेशसचिव निरुपमा राव मंगलबार काठमाडौं आउँदैछिन् । नेपालप्रतिको भारतको नीति र यसलाई साचालन गर्ने कुटनीतिज्ञले अपेक्षा गरेअनुरुप कार्य कुशलता प्रदर्शन गर्न नसकेकाले नेपाल मामिलालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले साचालन गर्न आवश्यक रहेको भन्ने किसिमको विचार नयाँदिल्लीबाट प्रवाहित भइरहेको बेला विदेशसचिव राव नेपाल आउन लागेकी हुन् । पर्यटन वर्षको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन आएका भारतीय पर्यटनमन्त्रीलाई बिर्सिदिने हो भने सन् २०११ मा नेपाल भ्रमण गर्ने राव सबैभन्दा उच्च भारतीय अधिकारी हुन् । मनमोहन सरकारले सन् २०११ मा चीन र पाकिस्तानलाई भन्दा नेपाललाई प्राथमिकतामा पारेको समाचार यसअघि नै भारतीय साचारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ । यी सबै तथ्यहरुको आलोकमा राव भ्रमणमाथि अर्जुनदृष्टि लगाउने हो भने उनको भ्रमणमा निहित गहनताको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विदेशसचिव रावले यसअघि चीनका लागि भारतीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाली सकेकी छिन् । त्यसैले नेपालसँगको भारतको सम्बन्धलाई चीनसितको सुरक्षा संवेदनशिलतासँग जोडेर हेर्ने आम भारतीय अधिकारीभन्दा उनी यस दिशामा अझ कठोर छिन् । यसअघि काठमाडौं आउँदा विदेशसचिव रावले नेपालमा चीनको चासो बढिरहेको सम्बन्धमा गम्भीर जिज्ञासा राखेकी थिइन् । नेपालमा चीनको भूमिका खोज्नैपर्ने भारतीय अधिकारीहरुको 'पि्र कन्सेप्सनु'ले रावको यसपटकको भ्रमणमा प्राथमिकता पाउने देखिँदैन । किनकि शान्ति प्रकि्रया संविधान निर्माण र सरकार गठनजस्ता द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न जटिल विषयहरुमा छलफल गर्दागर्दै चीनबारे सोच्ने फुस्रद उनलाई काठमाडौंमा मिल्नेछैन ।
विदेशसचिव रावको नेपाल भ्रमणको मिति अहिले पर्नु कुनै काकताली होइन । नेपालको शान्ति सम्झौताको अनुगमनका लागि राष्ट्रसंघले खटाएको अनमिनको कार्यभार समाप्त भएलगत्तै हुन लागेको उनको भ्रमण अनमिनको अनुपस्थितिमा यहाँ उत्पन्न हुने 'भ्याकुम' पूरा गर्नेतर्फ लक्षित छ । समग्र दक्षिण एसियामा कुनै पनि राष्ट्रसंघीय मिसनको आगमनलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र माथिको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका रुपमा भारतले चित्रण गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपालमा अनमिनको आगमनलाई भारतले अनिच्छापूर्वक स्वीकार गरेको थियो । नेपालमा अनमिन रहुजेल शान्ति प्रकि्रयामा आफ्नो भूमिका ओझेलमा पर्दै आएको भारतको विश्लेषण थियो । शान्ति प्रकि्रयाको हर्ताकर्ता हामी हौं भन्दै सुरक्षा परिषदका स्थाइ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले भारतलाई उपेक्षा गर्दै लडाकू शिविर चाहारेको भारतलाई शैह्य भएको थिएन । अनमिनको उपस्थितिले नेपालको शान्ति प्रकि्रयालाई आफूले चाहेको दिशामा डोर् याउन नसकेको महशुस गरी भारतले आफूप्रति सहानुभूति राख्ने र आफ्नो भक्ति गर्ने नेपालका दल तथा नेताहरुलाई अनमिनलाई फिर्ता गराउन पहल गरेको थियो । यस्तो प्रयासमा भारत सफल भएको छ । यसलाई नेपाल मामिलामा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको सबै स्थायी सदस्य राष्ट्रसँग भारतले हासिल गरेको विजयका रुपमा समेत लिन सकिन्छ । अनमिन नरहेको अबको अवस्थामा शान्ति प्रकि्रयामा भारतीय भूमिकालाई कसरी सघन बनाउने र आफूले चाहेअनुरुप सेना समायोजन र संविधानको मोडल स्वीकार गर्न माओवादीलाई कसरी बाध्य पार्दै उसको शक्ति कटौती गर्ने भन्ने विषयमा भारत चिन्तनशील छ । यही उद्देश्य हासिल गर्ने गहन कार्यभारसहित रावको नेपाल भ्रमण तय भएको हो । तसर्थ रावको काठमाडौं बसाइ अनमिन फिर्तिपछिको अवस्थाबारे विचारविमर्श गर्दैमा बित्नेछ ।
तर नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले रावको नेपाल भ्रमणलाई थप महTव दिलाएको छ । प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडलले पराजित हुने भयले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रकि्रया पुनः आरम्भ भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भारतले खेलेको भूमिकाले गर्दा नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेको थिएन । माओवादीप्रति निषेधको राजनीति गरेका कारण आफूप्रति आइलागेको माओवादीलाई सत्तामा पुनः पुग्न दिएर आफ्नो निरीहता प्रदर्शित हुन नदिन भारतले आफ्नो क्षमताको भरपुर उपयोग गरेको थियो । माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नदिन यसअघि भारतले सभासद खरिदबिक्रीदेखि सभासदलाई धम्काउनेजस्ता गैरकुटनीतिक हतकण्डा अपनाएको सर्वविदितै छ । यस दिशामा कुटनीतिक आवरण मिल्काई नांगो रुपमा प्रस्तुत भएको भारतले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि चीनलाई विवादमा तान्नेसम्मको धृष्टता गरेको थियो । यसबाट माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नदिन भारत कति प्रतिबद्ध छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा हुन गइरहेको भारतीय विदेशसचिव रावको नेपाल भ्रमणले यहाँको सत्ताराजनीतिसँग समेत सरोकार राख्ने भएकाले यसले रावको नेपाल भ्रमणलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ । भ्रमणको क्रममा रावले भेटघाट गर्ने व्यक्तिको सूचिको अध्ययन र यसक्रममा उनले गरेको संकेतले शान्ति प्रकि्रयाको भावी स्वरुप उद्घाटित मात्र गर्ने छैन यसले मेननले डा। भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको आशयलाई थप प्रस्ट बनाउनेछ ।
Posted by Sujit Mainali at 12:07 AM No comments: Links to this post